Ma fududa inaad dib u hesho backlit 2018?
Dhismaha xiriirrada ayaa had iyo jeer ka ciyaaray door muhiim ah oo ku jira qaabaynta raadinta raadinta. Si kastaba ha noqotee, qaababka dhismaha isku xirka ayaa la beddelay sannad kasta. Kan ugu weynaa ayaa ka muuqday 2013-kii markii uu Google ku sameeyay casriga Penguin. Cusboonaysiintaan waxay samaysay dhammaan qodobbada muuqda, kor u qaadaya qiimaha tayada xiriirrada soo galaya iyo bixinta dhammaan xiriirrada spammy.
Maalmaheena, dhismaha isku xirka waa arrin aad u murugo leh. Mid ka mid ah sheegashooyinka takhasuska ah ee qiimaha xidhiidhada dibadda ayaa hoos u dhacay halka qaar kalena ay ku doodaan in muhiimada ay si joogto ah u kacday sanadihii la soo dhaafay. Fahamadan isweydaarsiga ah waxaa sabab u ah bixinta spam links, iyo casriyeynta casriga ah ee Google ee isbedelka mudnaanta koorsadan. Hase yeeshe, wax kastoo aad maqasheen dhismaha xidhiidhka, weli si toos ah ayuu u saameeyaa qiimeynta boggaaga
. Websaytadu ma noqon karto mid sareeya SERP iyada oo aan lahayn tayada iyo khadka la xidhiidha.
Xilligan, sannadka 2017 ayaa soo afjaraya, waxaanan ku jirnaa fasaxyada sannadka 2018 ee ciidda Masiixiga. Google ayaa wali la dagaallamaya farsamooyinka dhismaha xiriiriyaha spammy iyo abaalmarinta khuseeya xiriirada soo socda. Farsamooyinka dhismaha ee spammy ee dhismaha ayaa ka gaabsaday. Dad badan oo websaydh ah ayaa go'aaminaya in ay maalgashadaan tayada waxqabadka tayada iyo dhismaha isku xirka. Waxay u horseedaa tartan aad u sareeya oo ku yaala arimahan.
Mid ka mid ah ma caawin karo laakiin waxay la yaaban tahay waxa noqon doona isbeddelada cusub ee aan ku yeelan karno xiriirinta xiriirinta dhismaha 2018. Maadaama aad tahay qof milkiilaha bogga leh, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa shaqeynaya iyo waxa aan ahayn.
In maqaalkan, waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah siyaabaha mustaqbalka-caddaynaya inaad ku sii wadato TOP ee ciyaarta search engine optimization.
Sidee si sahal ah dib ugu heleysaa 2018?
Wax kasta oo aad gacanta ku qabataan
Waxaan ku noolnahay aduunka oo dhan, oo ah waxyaabo la abuuray oo qiimahoodu aad u sarreeyo, gaar ahaan isku xirka dhismaha. Hubi inaad tixraacayso hoggaamiyeyaasha suuqa suuqyada si aad u hesho dib-u-tayo badan. Ha u tegin si ay u saxaan emailada maaddaama ay soo jiidanayaan spam adoo adeegsanaya cinwaanka.
Waxaa intaa dheer, ha u dhicin qalabka dhismaha ee isku xirka ah ee tooska ah maxaa yeelay waxay si xun u saameyn kartaa jagooyinka goobta iyo sumcadda caanka ah. Waxaan si adag kugula talineynaa in la tixraaco khabiirada xirfadlayaasha ah ee SEO kuwaas oo ku dhisi kara isku xirka si aad gacantaada gacanta. Farsamada dhisidda Skyscraper
Waa farsamo darawalnimo-darwalnimo ah kaas oo ay isticmaalaan khabiiro SEO ah si ay u helaan xiriirinta ilaha webka. Waxay ku salaysan tahay helista qayb tayo leh oo ku taala nalkaaga kaas oo horeba loo tixgeliyey ilaha qaddarinta iyo raadinta fursado si loo abuuro mowduuc wanaagsan oo ku jira fariin isku mid ah.
Waxaad ubaahan tahay in aad raadiso daabacaadyada cusub ee suuqa ku yaala si aad iskugu xidhid isku xirnaantaada. Haddii mawduucan la soo saaro ilaha shabakadda ee la qadariyo, waxay u badan tahay inuu horay u leeyahay darajo sare. Taasi waa sababta ay u tahay fursad aad u fiican oo aad ku heli karto juice juice laga helo ilaha maamulka. Iyada oo la abuurayo maaddo cilmi-baaris ku salaysan, waxaad ka saari kartaa midka asalka ah isla markaana waxaad ka heli kartaa jawaab wanaagsan Source .